Zvino muka Holm Nature! | Holmbygden.se
← pashure Next →
Zvino muka Holm Nature!
Posted on 6 Chivabvu, 2017 kubudikidza Holmbygden.se
Zvino, shiri dzinotama kudzokera, vava 10 nguva kupfuura taiva munguva yechando munyika yedu. First kumusoro ndiye blackbird ikozvino. Yaiva Titti uye Jørgen Olsson, Östbyn, vakaudza kuti chokutanga; 12/3. Gare gare vhiki zvakare chaffinch zvakaratidza navo. Pane shiri zvokudya kwokubatana munharaunda kuti anowana vårbesöken wokutanga. Pano pana Navarn (300 MOEH) akanga asiri kusvikira 19/3 wokutanga blackbird asati asvika.
Kwemakore rimwe nehafu apfuura ndakagadzira kukumbira Shiri nedzimwe mhuka pana Holm Bygdens Homepage (Uye magazini ondomoka). Titti Olsson, Östbyn, uye Arnold Johansson, Långliden, vaiva vaya vaifarira.
Arnold (82) yave forester uye zvipenyu chitandadzo, pekugara panzvimbo, kubva pauduku. Ndainomuona April 2016 uye akapa hunhu hwake dhayari. Iye akacherechedza 20 vårfåglars wokutanga kusvika musi muna Långliden pakati 1951-2011. 60 gore manotsi zvichava sayenzi Mellannorrland uye Sweden. Pano tinogona kuona kuti tichiimba lark, Lapwings kuva vashoma / gare gare uye kuti pane, ndivo blackbird uye chaffinch wokutanga Liden munguva yechirimo ikozvino. Arnold kwakaita dhayari kwave kuzviisa pasi Administrative Board uye Swedish Species Information Center (SLU muna Uppsala). Swedish Agricultural University (SLU) akatanga fenologiprojekt yedu ("Kusvika kwematsutso" munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika) achirifananidza kasvisto uye miti nemhuka zvakazonaka. Kunosanganisira shavishavi rokutanga, nyuchi, ne, maruva, shiri kusvika, nyungudika mm munharaunda (zano) iwe kurarama. Ichi chikamu zvinotevera kuchinja okunze ari Sweden / World.
Titti uye Jørgen anenge kanoverengeka vakachengeta nyanga namazizi uye pasi namazizi mumadekwana pamusoro infields kurutivi rwokumusoro Holmsjön kubva pemwedzi April! Christin "Titti" Olsson, Östbyn, uyo baba akashanda Sundsvall F.D.. "Bird muzvinambiri" mu 80- uye 90 talet.Nils Lundmark, apinda pakarepo uye aida kuzodzosera kumisa mubereko wavo shiri. Nisse, vakafa 2006, aipedza nguva yakawanda vari Holm- uye Liden nzvimbo uwandu uye kurira nezvinorira woisa vanongodya mazana maviri munharaunda yedu panguva 80-90 remakore (namazizi uye dippers). Under Sina 60 Makore somunhu ornithologist akaisa Nisse kumusoro pamusoro 1600 diki shiri vanongodya uye pamusoro 400 namazizi. He iwo pamusoro 12.000 shiri.
Årsvädret muna Holm akanga akanakira fauna of (Also Flora). August uye September akanga inodziya kupfuura dzose uye vakabatsira kupona zvikomo zvakanga kupfuura munguva dzose yezhizha. Kazhinji unopona mu Chick kubva nemarara rokutanga gore. Zvino, vakapona kupfuura vasanonoka pamberi Kutama akatora pamusoro mumatsutso.
The undersigned ane uwandu kuti maberekero shiri munharaunda kubva 2000 (pana Storsten Ant kumusoro Storflon, kuchamhembe Vike) uye Lokåsen muna Nordanede (kumaodzanyemba Holm).
Leaderboard pamusoro inventories okupedzisira 4 Makore Dzakafanana bhokisi pedyo. Vari kubva yedu dondo munzvimbo, uye izvi 16 Shiri unogadza pamusoro 80 % yevaya kuwanikwa mumasango Holm raMwari.
The mupanda pazasi 13 vanhu vakanga akashuma zvavanenge vawana munyika Holm mugore (7 pokugara muna Sundsvall!!?). Pano unogona kuona zvose zviri rakashuma muna Holm.
Asi isu kumirira sightings yenyu panguva 2017. Tapota taura Titti uye ini zvokuita kuva mutori chii chinoitika zvakasikwa muna Holm. We kukubatsira mberi.
Vakaudza shiri Holm 2016
In yechando, ari "kuperevedza shiri", chete 10 % zvichienzaniswa muzhizha. Ona bhokisi pedyo.
Vamwe anokosha zvaanorumbidza panguva 2016 ndizvo Golden Eagle ari nesting mwaka musango kuchamhembe Holmsjön. Titti uye Jørgen Ini Östbyn kuva kestrels nesting ari dendere shiri panyika kwemakore akawanda. Mukuwedzera, vava muchirimo 2017 aiva ivhu zizi uye hornuggla paMaare pana Holmsjön pedo mudzimba dzavo.
Vanoshupika / shiri pangozi, chinowanzoitwa Holm
Miljödepardementet kuva, Via EU, in S. K. Red List kuti zvinoshanda mhuka dzose- uye växtarterter European mazita pangozi mhuka.
pedo pangozi (NT ari mupanda)
dhererwa (VU ari mupanda)
Vanoverengeka pedo pangozi uye dhererwa shiri vane hwakanyatsorwisa yakanaka Kupona nharaunda munharaunda Holm.
Rarira kuti vakurise kana kuona kuda kuti paPDF: Pangozi uye pedyo pangozi mhando muna Holm
"The panguva Navarn"
Report shiri sightings kwatiri:
Peter Berglund 070-5880994 peter.berglund50@gmail.com
Titti (Christin) Olsson 070-6300617 hristin.olsson@skola.sundsvall.se
Chinangwa ndechokuti vaumbe yakakura nomumbure kuti anovandudza mufananidzo mhando inowanikwa munzvimbo. Pakazodzwa, nemambure achapiwa kuratidzirwa mhuka, zvipembenene zvinomera kuti misoro mufananidzo zvinhu iri kuchamhembe taiga dzinogarisana. Asi zviri kuda kukupa kuziva kuitira kuti tinogona kuwedzera zvisikwa Guard.
kupinda uyu re mu nhau kubudikidza Holmbygden.se. Bookmark ari permalink.